Jake Paul dia niaiky fa mpampijaly izy tany amin'ny lisea taorian'ny nanombohany nanohitra ny fampijaliana - Pop-Kolontsaina
Jake Paul dia niaiky fa mpampijaly izy tany amin'ny lisea taorian'ny nanombohany nanohitra ny fampijaliana
Vao haingana i Jake Paul no nanaiky tamin'ny resadresaka nifanaovana fa tamin'ny fanomezana sy ny faran'ny fanararaotana nandritra ny fianarany tany amin'ny lise. Ny fanambarana dia natao mifandraika amin'ny fototra vaovaon'ny YouTuber izay miaro amin'ny tsy fanararaotana.
YouTuber 25 taona sy kintan'ny fantsona Disney teo aloha, Jake Paul dia nanomboka ny asany an-tserasera tamin'ny 2013 niaraka tamin'ny rahalahiny, Logan Paul. Indray mandeha mpilalao sarimihetsika tsy manan-tsiny niseho tamin'ny seho Bizaardvark , Ny asan'ny YouTube an'i Jake dia nahatonga azy tsy hifehy. Nanomboka tamin'ny fiampangana fanararaotana ka hatrany amin'ny fety manipy tao anatin'ny areti-mandringana, Jake Paul dia nivadika ho fahavalom-bahoaka.
Na izany aza, maro no nanomboka tsy nahita azy hafa taorian'ny nanombohany ady totohondry. Tahaka ny rahalahiny Logan, Jake dia nanavotra ny tenany tamin'ny fifantohany tamin'ny fanatanjahantena.
Jake Paul dia nizara ny eritreriny momba ny fototra vaovao
Tamin'ny 21 Jolay, iray volana mahery talohan'ny ady nifanaovany tamin'i Tyron Woodley, mpiady amin'ny MMA, dia nanambara ny fanombohana ny fototra iorenany 'Boxing Bullies', izay miady amin'ny cyberbullying.
inona no hatao rehefa ratsy tarehy ianao
Ny alakamisy tolakandro dia nitafa i Jake momba ny fandefasana ny fotony ho avy, izay nanipazany antsipiriany ny drafitra ho an'ireo ankizy voarohirohy.
'Ity dia zavatra efa niarahanay nandritry ny herintaona izao. Farany dia handefa azy isika. '
Nolazainy fa ny fototra dia hiompana amin'ny fanomezana traikefa an-tsokosoko zaza 100 hahafahany mampianatra azy ireo hiaro tena 'amin'ny fampijaliana'.
'Hametrahantsika ankizy 100 hanao fanazaran-tena amin'ny ady totohondry sy ady an-trano hafa mba hananan'izy ireo traikefa. Hoentintsika izy ireo mpanazatra sy fonon-tànana ofisialy ary hampianatra azy ireo satria tsy maintsy miaro tena amin'ny fampijaliana isika rehetra. '
Jake Paul dia nilaza tamin'ilay mpanao fanadihadiana fa efa 'teo an-daniny roa' amin'ny fanaovana herisetra izy rehefa nihalehibe izy.
Niresaka ny tenany ho 'zaza manahirana' i Jake teo aloha, niresaka momba ny zavatra tsapany rehefa teo am-pitoan'ny fampijaliana, indrindra nandritra ireo andro voalohany tamin'ny YouTube.
'Tena nisy fiantraikany tamiko io ary tamin'izay no nahatsapako fa ny zavatra lazain'ny olona isan'andro ... indraindray tsy mieritreritra azy ireo izy ireo ... rehefa mandefa ompa na bitsika ianao fa misy olona iray etsy andaniny mandray azy . Mety hisy fiantraikany amin'ny andro sisa iainanao izany. '
Hiorina amin'ny 25 Jolay ny fototra Jake Paul Boxing Bullies. Mandritra izany fotoana izany dia hanomboka ny 29 aogositra ny tolona andrasana fatratra amin'i Tyron Woodley.
Vakio ihany koa: Jeffree Star dia nanambara fa manana fananana vaovao amin'ny toeram-piompiana Wyoming tsy miankina izy satria maniry azy ny tsara indrindra ny mpankafy
ny fomba famelana heloka ny olona tsy hanaiky fa diso izy ireo
tahaka Azy aho, inona no ataoko
fihaonana amina bandy voalohany amin'ny olona